Ụlọ nkwari akụ China Hotel Door Absorption Minibar M-25T Nrụpụta na Ụlọ ọrụ | AOLGA
Ụlọ oriri na ọ Glassụ Glassụ Glass Glass Minibar M-25T
Nkọwapụta :: 220V-240V ~ / 50Hz ma ọ bụ 110-120V ~ / 60Hz; 60W; 4-12 ℃ (na ambinet bụ 25 ℃)
Agba: Nwa/Agba ntụ
Njirimara: Usoro jụrụ oyi: Teknụzụ nsị, okirikiri mmiri amonia; Minibar enweghị compressor, enweghị fan, enweghị akụkụ na -akpụ akpụ, enweghị Freon, enweghị ịma jijiji, na -agbachi nkịtị ma ghara iwepụta mkpọtụ ọ bụla, na -arụ ọrụ nke ọma na nke ọma.
Absorption Minibar M-25T na-esetịpụ akara ọhụrụ na nkasi obi ndị ọbịa, ngosi ngwaahịa na arụmọrụ ike. N'igosi teknụzụ nnabata ụda mkpọsa Mdesafe, ngwa nju oyi minibar 25 l na -agbachi nkịtị kpamkpam na arụ ọrụ yana nke akụ na ụba. Ọnụ ụzọ enyo ya na ọkụ ime ụlọ ya nke ọma na -eme ka ihe minibar na -enye iji kwalite ahịa gị. Nhọrọ nkwalite: njikwa ụzọ, mkpọchi, mgbachi aka ekpe n'akụkụ aka, njikwa oghere oghere LED.
Usoro jụrụ oyi: teknụzụ nnabata, okirikiri mmiri amonia.
1.Minibar bụ otu n'ime ngwaahịa ndị dị mma gburugburu ebe obibi, na -enweghị fluorine, na -ebute mmetọ ikuku. Ọrụ dị elu na mmịpụta teknụzụ ọhụrụ ka mma na jụrụ oyi site na amonia.
2. Minibar enweghị compressor, enweghị fan, enweghị akụkụ na -akpụ akpụ, enweghị Freon, enweghị mkpọtụ, gbachi nkịtị ma ghara iwepụta mkpọtụ ọ bụla, na -arụ ọrụ nke ọma. Ngwaahịa ndị a nwere ike gbaze na akpaghị aka wee bụrụ nke friji jụrụ oyi.
3.Ndị ngwaahịa na -anabata njikwa okpomọkụ elektrọnik, nke na -eme ọnọdụ okpomọkụ na ngwaahịa a.
4. Kpamkpam ọbụlagodi, nwee obere mgbanwe mgbe ịmalite na imechi.
5. Ọnụ ụzọ nke ngwaahịa a na-agbanwe aka ekpe na aka nri.
6. Ọrụ enweghị mmezi, ịchekwa ike, ogologo ndụ na akwụkwọ ikike afọ 5.
1. Aka ekpe ma ọ bụ aka nri mepere emepe
2. Agba (Black, White, wdg)
3.Ọzọ siri ike ma ọ bụ ọnụ ụzọ iko
4.Print ahịa logo
5.Pdị nkwụnye ike, Maka ọmụmaatụ, ụdị Spain, ụdị New Zealand, ụdị USA, ụdị Europe wdg.
7.AC ma ọ bụ DC
8.Shelving nwere ike hazie izute kpọmkwem nchekwa
• ọnụ ụlọ ọbịa ụlọ oriri na ọ Hotelụ Hotelụ, Ọfịs, Ụlọ Ọgwụ ma ọ bụ Ụlọ wdg.
Ntuziaka nke Absorption Hotel Mini bar
1. Biko hapụ ngwaahịa ka ọ rụọ ọrụ ihe dị ka elekere 1 na -enweghị ibu, wee tinye nri mgbe ị na -eji ngwaahịa a na nke mbụ.
2. Ngwaahịa ahụ ga -eguzo n'ahịrị ma enweghị ike ịkatọ ya; ma ọ bụghị ya, ọ ga -eme ka oyi jụrụ oyi.
3. Enwere ọnọdụ 5 kpamkpam na ngwaọrụ na -agbanwe ọnọdụ okpomọkụ, na -ejikarị biko jiri ọnọdụ 1 bụ nke kacha ekpo ọkụ mgbe ọnọdụ 5 bụ nke kacha mma.
4. Etinyela ihe nri n'ụba kabinet otu ugboro, biko tinye nwayọ tinye nri.
5. A ga -edobe ụfọdụ anya n'etiti ihe oriri echekwara na kabinet, ka ikuku jụrụ oyi wee na -efegharị n'enweghị ihe ọ bụla na ọnọdụ okpomọkụ ga -adịkwa.
6. Iji chekwaa ume, biko gbalịsie ike ka ị belata oge mmeghe ụzọ yana mee ngwa ngwa oge ọ bụla ị mepere ụzọ.
7. Mgbe ị kwụsịrị iji, biko jiri akwa mmiri dị nro hichaa ime cube ahụ, ka ikuku na -ekesa n'ime cube ka ị zere imebi eriri nke cube ahụ.
8. Ikanam ọkụ, 3.6V/1W.
Absorption Obere mmanya
4-12 ℃ （Na 25 'Ambient'
Nke gara aga: Absorption Hotel Minibar M-25A
Osote: Absorption Hotel Minibar M-30A
ihe ọ fụ fụ friji
iko ngwa nju oyi
minibar ụzọ iko
Minibar Absorption Hotel
Friji ụlọ nkwari akụ
Minibar na mkpọchi
Obere nkwari akụ Minib ...
Ụlọ nkwari akụ na ụlọ eji Abs ...